Funda Iphi Vesi kwaye ubone Iimpawu zesiNgesi
Isenzi siyinxalenye yentetho (okanye igama leklasi ) elichaza isenzo okanye isenzeko okanye ibonisa isimo salo.
Kukho iindidi ezibalulekileyo zezizenzi: (1) iklasi enkulu evulekileyo yezenzi zentsingiselo (ezaziwa nangokuthi izenzi eziphambili okanye izenzi ezipheleleyo - oko kukuthi, izenzi ezingaxhomekeke kwezinye izenzi); kunye (2) neklasi encinane evaliweyo yezenzi ezincedisayo (ezibizwa ngokuba nezenzi zenziwayo ). Amacandelo angama-subtypes abancedisayo ayencedisayo ( ayenayo , ayenze , ayenze ), anokuthi enze njengezenzi ezixhasayo, kunye nabancedisi bamodal ( banako, benako, benokuthi, kufuneka, bafanele, baya kufuneka, kwaye ngaba ).
Izenzi kunye nezenzi zesebe zisetyenziswa njengeziqendu. Bangabonisa ukungafani ngexesha , ixesha , umxholo , inombolo , umntu kunye nezwi .
Jonga imizekelo kunye nemiba engezantsi. Kwakhona ubone: Amanqaku kwiiNtebe kunye neNtebe yeNgqungquthela .
Iintlobo neeFomu zeeVenki
Iintlobo ezili-10 zeetenzi
IiVebsi eziNcedisayo kunye neeLebhu zeLexical
IiVandi eziDynamic kunye neeVenzi zokuSebenza
IiNtebe eziPhelisiweyo kunye neeVenibhi ezingezantsi
IiVebhu ezingenasiphelo kunye neeVenzi eziTshintsho
Iilwimi ezingavumelekanga kunye namaVenzi rhoqo
Iilwimi zeeFrasal kunye nezenzi zokuPasa
Icandelo leNqununu yeLwimi
Ukususela kwisiLatini, "igama"
" Hamba kwivenkile uze undenze ibhokisi ye-gingersnaps."
(UWilliam Faulkner, "amaHors ahlulwe," 1931)
" Udonsa aze adwebe aze atye , aze athethe iintetho kunye neentetho kunye neentetho , kwaye iimephu zakhe ziphosakeleyo."
(Rudyard Kipling, "Kwi-Twenty-Two," 1890)
"Phandle kwitalato abantu abambalwa kwiimpahla zabo ezintle zihambahamba kwibala elidlulileyo emqolo wezindlu zitena."
"UBaley wahamba emva kwe-candy counter kwaye wancika kwirejista yemali."
"Ukususela kwixesha likaKrismesi, uKapa uStepus wasizisa amathoyizi afundisa abafana kunye namantombazana (ngokwahlukileyo) indlela yokwakha izinto."
(Eudora Welty, I- One Writer's Beginnings , 1984)
" Yenza oko unokukwazi , kunye nento onayo, apho ukhona."
"Kulo lonke ulungelelwaniso lwezinto, ndingatsho ukuba awunanto ngaphandle kwesigcawu esincinci."
(Jimmy Stewart, Ubomi Obunomdla , 1946)
"Iimoto, ukukhwela i-green village, zifana neempukane eziye zazuza indlebe yangaphakathi- ziyi-buzz, ziyeke, ziyeke, ziqalise, zitshintshe, ziyeke, ziyeke, zityumle , kwaye yonke imiphumo iyinto ephazamisayo i-polytone."
"Emva kwe-phony tinsel yaseHollywood yindawo ekhoyo."
"Wangena emnyango waza wanyuka , kwaye ndedwa."
(PG Wodehouse, Siyabonga, Jeeves , 1934)
"Abanye abantu bathi kufuneka ndibe ngumntu owonayo, kodwa akuyinyaniso. Ndine ntliziyo yenkwenkwe encinane kwintlanzi kwideskiti yam."
"Ndiya kugxotha amagama kulo mnyama ndize ndilinde , kwaye ukuba i-echo ezwakalayo , kungakhathaliseki ukuba yinto ephosakeleyo, ndiza kuthumela amanye amazwi ukuxelela , ukuhamba , ukulwa , ukudala ukulamba kwindlala ebomini. kuthi sonke, ukuba sihlale sisaphila ezintliziyweni zethu ngengqondo yabantu abangenakuqonda. "
"Kukho iindlela ezininzi zezithethi zokubona ihlabathi." Sinokubona , ukujonga, ukujonga, ukujonga, ukujonga, ukuhlola , ukuhlola okanye ukujonga . mgangatho ... "
(UJohn Foer, "Othotyayo kubaqalayo." I-New Yorker , uDisemba 24 no-31, 2012)
"Ndiyindoda encinci." Uyabona, ndisebenzisa izenzi, izenzi zihlobo zethu.
(USteve Urkel kwiNtsapho yeMicimbi )
" Iingenzi zongeza umdlalo kwiqela elingahleliyo lamanye amazwi, ukuvelisa isiganeko, okwenzekayo, umzuzu othakazelisayo. Baye baqalisa ukuvakalisa izivakalisi: ngaphandle kwabo, amagama aya kuqokelela ndawonye kwimifanekiso enqanyanyisiweyo, elinde into yokuchofoza."
(I-Constance Hale, iSin kunye ne-Syntax: Indlela yokuCwangcisa iProse Effective Prose .
"Indlela engcono yokuqonda isenzi ... yiyo ifomu yayo, yayo - kunye neyokuphela kwayo; izenzi zine- need kunye ne-ifomu, nangona kwimeko yezinye izenzi ezingaqhelekanga ezi fomu azibonakali Kwaye yonke isenzi, ngaphandle kokunye, ingabhalwa ngabancedisi . "
(UMartin Kolln, ukuqonda isiNgesi ngegrama, 1998)
Phakathi kweziganeko ezisemthethweni zesiNgesi izenzi zithi:
a. inokudlulelwa kwintsikiselo ngokuxhomekeka - (e) njengokuba uhambahamba, wavula, wathi ;
b. inokuthi ibe yintsebenziswano ngokuxhomekeka-njengokwenza umenzi, uhambahamba, umazi .
c. inokuthi ingenziwa yinto engalunganga ngokuqulunqa ukungavumelani, ukusalala, ukungathandi .
"Ezinye izenzi ziyabonakala ngefomu kuba zidalwe ukusuka kwezinye iindawo zentetho kunye nesenzo sokwenza isenzo se- morphemes ( fals ify , in anger ). Iingenzi nazo ziyabonakala ngenxa yokukwazi ukutshintsha ifomu ngokuchithwa, ngokuthatha iziphelo ezibonisa Umntu wesithathu unomnye ( udla ), ixesha elidlulileyo ( adle ), athathe inxaxheba ethathe inxaxheba ( udliwe ), kwaye ubonise ukuba uthatha inxaxheba ( udla ). Kodwa ngaphandle, ngaphandle kwemeko , akunakwenzeka ukuxelela ukuba amagama afana neenja / izinja kunye nentloko / iintloko izibizo okanye izenzi. "
(Thomas P. Klammer, et al., Ukuhlaziya i-Grammar yesiNgesi .) I-Pearson, 2007)
Iseluleko seStlisti: IiVandi eziDynamic
" Izenzi ezinamandla ziyigama lamagama aseklasini." Bajika isihloko sesigwebo kumenzi othile kwidrama. Kodwa kukho izenzi zentshukumo - kwaye zikhona i-dynamos. zonke izinto ezinamandla, kodwa asivumeli ukuba sicinge ngesenzo. sashay ...
"Iingenzi zenza okanye zidibanise ukubhala kwakho, ngoko ziqwalasele ngokucophelela kwisigwebo ngasinye." Ngaba ufuna ukuhlala phantsi kwesihloko uze ubambe isibuko kuyo? Yenza umdlalo. Nokuba ungakhetha, unike abafundi bakho ulwimi olubenza bafune isigwebo esilandelayo. "
(UConstance Hale, "Yenza i-Verbs-Break-Verbs." I-New York Times , ngo-Ephreli 16, 2012)
I-Side Lighter yeeVenzi
"Musa ukuzama ukusebenzisa 'iphathi' njengesenzi kwisitolo sam."
(Dylan Moran, "Party." Amabhuku amnyama , 2004)
UKelly Taylor: Kulungile, ngoko. Ungathanda ukuchitha ixesha lakho ngaphambi kokulala? Ngaba ungathanda ukubhala?
U-Erin Silver: Hayi, andikuthandi ukushicilela. Andifuni nokusebenzisa igama lephephabhuku njengesenzi .
(Jennie Garth noJessica Stroup, "Okaeri, Donna!" 90210 , 2009)
Ukubhengezwa kwegama: vurb
Ubonisa ukuqhubela phambili ngokugqibeleleyo (isenzi sexesha)
IiVebhu eziKhuselekileyo kunye neNkqubo
Iingcebiso zokuqhuba udliwano-ndlebe
Kutheni ungazange uchithe iNkunkuma kwiindawo zokuLwandle?
I-Inference: Ulungelo olubalulekileyo
Deadpool vs. Wolverine: Ubani Owunayo?
I-Virginia Wesleyan College Admissions
IYunivesithi yaseWest Georgia Admissions
Ukubaluleka kweeNkalo zesiGaba
Iyiphi iNdlela ekhethiweyo yokubhala ukubhalisela 'iUnited States'?
Yintoni iCrystal Therapy?
Malunga ne-United States Congress